प्राय: सोधिने प्रश्नहरू | Carewell SEIU 503
FAQ हरू हेर्न सेक्सन चयन गर्नुहोस्
भुक्तान समय बन्द
म दन्त बिमा कसरी पाउन सक्छु?
एकचोटि तपाईंले केयरवेल एसआईयू 50० benefits दन्त बेनिफिटहरूको लागि योग्य भएपछि तपाईंसँग कैसर स्थायी दन्त योजना मार्फत कभरेज हुनेछ । योग्य बन्न तपाईंले or० वा बढी योग्य काम गर्ने घण्टा काम गर्नुपर्नेछ - सम्झौता इकाई घण्टा पनि भनिन्छ - लगातार दुई महिनासम्म । त्यसोभए तपाईंले थप महिना कुर्नुपर्नेछ जब तपाईंको घण्टा लाभ प्रशासनिक कार्यालयमा रिपोर्ट गरिन्छ। दन्त पृष्ठमा योग्यताको बारेमा थप पढ्नुहोस् ।
के म दन्त खर्चको लागि मेरो सुविधा सुविधा कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु?
होईन, बेनिफिट सुविधा कार्ड दन्त, दर्शन + श्रवणशक्ति, वा कर्मचारी सहायता कार्यक्रम खर्चको लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
के मसँग कैसर स्थायी दन्त बाहेक अरू विकल्पहरू छन्?
Carewell SEIU 503 तपाईंको दन्त कभरेजको लागि अन्य विकल्पहरू प्रदान गर्दैन। जहाँसम्म, यदि तपाईं कैसर सेवा क्षेत्र बाहिर बस्नुहुन्छ, तपाईं कैसर परमेन्टेको दन्त छनौट पीपीओ योजना मा भर्ना हुनुहुनेछ। KP डेन्टल च्वाइस पीपीओ अन्तर्गत तपाइँ कुनै पनि इजाजतपत्र दंत चिकित्सक भ्रमण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यद्पि तपाईले कम पैसा तिर्नुहुनेछ यदि तपाई क्यान्टेरको पीपीओ नेटवर्कमा सहभागी दन्त चिकित्सकको भ्रमण गर्नुभयो। तपाईं कैसर सेवा क्षेत्र भित्र वा बाहिर बस्नुहुन्छ भनेर पुष्टि गर्न, लाभहरू प्रशासनिक कार्यालयलाई १-84444-5077-75554 मा सम्पर्क गर्नुहोस्, विकल्प then त्यसपछि विकल्प २।
मसँग पहिले नै दन्त योजना छ। के म दुई पाउन सक्छु?
सुविधाहरूको समन्वय सम्बन्धी प्रश्नहरूको लागि, कृपया कैसर स्थायी ग्राहक सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
मसँग पहिले नै मलाई मनपर्ने दन्त चिकित्सक छ। के म यस दन्त चिकित्सकमा जान सक्छु?
यदि तपाईं कैसर सेवा क्षेत्र बाहिर बस्नुहुन्छ र एक विशिष्ट प्रदाता जो नेटवर्क मा छैन, तपाईं आफ्नो दन्त चिकित्सक सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरू कैसर परमेन्टेको साथ प्रमाणिकरण प्राप्त गर्न इच्छुक छन् कि त तिनीहरू नेटवर्क को भाग बन्न सक्छ।
यदि तपाईं कैसर सेवा क्षेत्र भित्र बस्नुहुन्छ भने तपाईं नेटवर्क को एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रदर्शन कुनै पनि सेवा को कभरेज प्राप्त छैन।
के म मेरो जीवनसाथी वा परिवारका अन्य सदस्यहरू थप्न सक्छु?
होइन। Carewell SEIU 3०3 सुविधाहरू केवल योग्य होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूको लागि उपलब्ध छन्।
के म दन्त, दृष्टि + सुनुवाई, वा कर्मचारी सहायता कार्यक्रम बेनिफिटहरूबाट अप्ट आउट गर्न सक्छु?
हो तपाईं माफी फारम भर्न र लाभ प्रशासनिक कार्यालयमा पेश गर्न सक्नुहुन्छ।
लाभ छूट फाराम (डिजिटल)
म कसरी दृष्टि / श्रवण बीमा प्राप्त गर्न सक्छ?
एक पटक तपाईं Carewell SEIU 503 दर्शन + श्रवण बेनिफिटहरूको लागि योग्य भएपछि तपाईंसँग Ameritas योजनाको माध्यमबाट कभरेज हुनेछ जसले दर्शन, सुनुवाई, र LASIK सुविधाहरू प्रदान गर्दछ। योग्य बन्न तपाईंले or० वा बढी योग्य काम गर्ने घण्टा काम गर्नुपर्नेछ - सम्झौता इकाई घण्टा पनि भनिन्छ - लगातार दुई महिनासम्म । त्यसोभए तपाईंले थप महिना कुर्नुपर्नेछ जब तपाईंको घण्टा लाभ प्रशासनिक कार्यालयमा रिपोर्ट गरिन्छ। दृष्टि + सुन्न पृष्ठमा योग्यताको बारेमा थप पढ्नुहोस्।
के म मेरो सुविधा सुविधा कार्ड दर्शन + श्रवण खर्चको लागि प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि दर्शन प्रदायक VSP च्वाइस नेटवर्कमा छ भने म कहाँ पाउन सक्छु?
तपाईं VSP को वेबसाइट vsp.com/eye-doctor भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ वा १-8००-87777-7१5call कल गर्न सक्नुहुन्छ।
मसँग प्रतिपूर्ति दाबी बुझाउन कति समय लाग्छ?
तपाईंले सेवाको मिति देखि days ० दिन भित्र पुनःपूर्व दावी फारम बुझाउनु पर्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ नेटवर्क को आउट प्रदायकबाट चश्मा खरीद गर्नुहुन्छ तपाईं VSP सदस्य प्रतिपूर्ति दाबी फारम बुझाउन days ० दिन लाग्नेछ। १-8००-5555-4-4 31 31१ मा Ameritas कल गर्नुहोस् तपाइँ अधिक प्रतिपूर्ति हुनेछ यदि तपाइँ एक नेटवर्क प्रदायक मा जानु भयो के बारे मा अधिक जान्नको लागि।
म कसरी कर्मचारी सहायता कार्यक्रम को लाभहरु प्राप्त गर्न सक्छु?
एक पटक तपाईं Carewell SEIU 503 EAP सुविधाहरूको लागि योग्य भएपछि तपाईंसँग रिलायन्ट व्यवहार स्वास्थ्य मार्फत कभरेज हुनेछ । योग्य बन्न तपाईंले or० वा बढी योग्य काम गर्ने घण्टा काम गर्नुपर्नेछ - सम्झौता इकाई घण्टा पनि भनिन्छ - लगातार दुई महिनासम्म । त्यसपछि तपाईं गर्दा आफ्नो घण्टा लाभ प्रशासनिक कार्यालय रिपोर्ट छन् एक अतिरिक्त महिना प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। कर्मचारी सहायता कार्यक्रम पृष्ठमा योग्यताको बारेमा थप पढ्नुहोस्।
के म मेरो लाभ सुविधा कार्ड EAP खर्चको लागि प्रयोग गर्न सक्छु?
परामर्श र वित्तीय योजना जस्ता म कर्मचारी सहायता कार्यक्रम लाभहरू कसरी प्रयोग गर्ने?
तपाईं आइबहसोल्युसन.कम्स भ्रमण गरेर वा १-86666-750०-१२7 calling कल गरेर सेवाहरू पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको पहुँच कोड: OHWBT हो।
के & #039; को विशेष नामांकन अवधि र म यसको लागि योग्य छु?
विशेष नामांकन अवधि ("SEP") ले तपाईंलाई नियमित खुला नामांकन अवधि (नोभेम्बर १ - डिसेम्बर १ 15) बाहिर स्वास्थ्य बीमा योजनामा भर्ना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं एक SEP को लागि योग्य हुन सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले जीवन परिवर्तन अनुभव गर्नुभयो, जस्तै रोजगार आधारित कभरेज गुमाउनु, वा आयमा परिवर्तन जसले तपाईंलाई मेडिकेडको लागि योग्य बनाउँदैन। यदि तपाईंको एसईपी बजारबाट स्वीकृत हुन्छ भने तपाईं मार्केटप्लेस योजनामा नामांकन गर्न सक्नुहुनेछ तर तपाईं भर्ना हुन सीमित समय पाउनुहुनेछ, सामान्यतया तपाईंको योग्यता जीवन घटनाको मितिबाट 60० दिन। बजार स्थानलाई पनि प्रमाण चाहिन्छ कि तपाईं विशेष नामांकन अवधिको लागि योग्य हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईं आफ्नो नामांकन पूरा गर्न जतिसक्दो चाँडो जानकारी संकलन गर्न चाहानुहुन्छ। सहायताको लागि, कल गर्नुहोस् १-84444-5033-734848।।
स्वास्थ्य सेवा लागत सहायताको लागि योग्यता आवश्यकताहरूको केहि अपवादहरू छन्?
यदि तपाईं आफ्नो पति / पत्नी मार्फत चिकित्सा कभरेजको लागि योग्य हुनुहुन्छ, तर तपाईं त्यो कभरेजमा भर्ना नगर्न रोज्नुहुन्छ भने, तपाईं Carewell SEIU 503 स्वास्थ्य सेवा लागत सहयोगको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। अधिक जानकारी को लागी १-84444-5033-734848। कल गर्नुहोस्।
के म भ्याली बीमा पेशेवरको सट्टामा मेरो आफ्नै बीमा एजेन्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
तपाईं गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईंले उपत्यका बीमा प्रोफेशनल्सका सेवाहरू प्रयोग गर्नुभयो, जसले अनुभवी बजार योजनामा नाम दर्ता गर्ने हेरचाह प्रदायकहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने, र हेरचाह प्रदायकहरूले स्वास्थ्य सेवा लागत सहायतामा पहुँच गर्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, केयरवेल बेनिफिट्स कार्यक्रमको साथ काम गर्ने वर्षौं अनुभव राख्छन्। यदि तपाइँ आफ्नै बीमा एजेन्ट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले वार्षिक कागजी कार्यमा सामेल कुनै अभिकर्ता अभिलेख फारम भर्नुपर्दैन, तर कृपया १-84444-50503-734848 call लाई कल गर्नुहोस् हाम्रो प्रतिनिधि मध्ये एक जनालाई थाहा दिनुहोस् कि तपाइँ तपाइँको आफ्नो एजेन्ट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अभिलेख अभिलेख फारम पूरा गर्दै।
के म औसत प्रीमियम प्रतिपूर्तिहरूको लागि योग्य छु?
तपाईं हेल्थकेयर लागत सहयोगको लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं अन्तिम खुला नामांकन अवधि समाप्त भए पछि केयरवेल SEIU 50०3 सुविधाहरूका लागि योग्य बन्नुभयो र तपाईं हेल्थकेयर मार्केटप्लेसमा गैर-स्वीकृत योजनामा भर्ना हुनुभयो भने। त्यो अवस्थामा, तपाइँले जेबबाट खर्च भएको भुक्तानी गर्न बेनिफिट सुविधा कार्ड प्राप्त गर्नुहुनेछ, र तपाइँ तपाइँको वास्तविक प्रीमियम भन्दा कम वा योग्य हेरचाह प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको औसत प्रीमियम रकम सम्म तपाइँको प्रीमियम लागतहरूको प्रतिपूर्तिको लागि योग्य हुनेछ। स्वास्थ्य सेवा लागत सहयोग मा। बर्षको अन्त्य पछि हेल्थकेयर लागत सहायता प्राप्त गर्न जारी राख्नको लागि, तपाईं आफ्नो पहिलो अवसरमा स्वीकृत योजनामा भर्ना हुनुपर्दछ र खुला नामांकन भन्दा पछि (नोभेम्बर १ र डिसेम्बर १ 15 बीच)। अन्यथा, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा लागत सहायता पात्रो वर्षको अन्त्यमा रोकिनेछ। यदि तपाईं औसत प्रीमियम प्रतिपूर्तिहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ भनेर जाँच गर्न १-84444-5077-75554, विकल्प,, विकल्प २ मा कल गर्नुहोस्।
मेरो शुद्ध स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के हो?
तपाइँको शुद्ध प्रीमियम मासिक रकम हो जुन तपाइँ तपाइँको बीमा कम्पनीलाई तिर्न अनिवार्य छ तपाइँको बीमा कायम गर्न। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको सकल प्रीमियम (तपाइँको बीमा वाहक बाट प्रीमियम को पूरा लागत) प्रति महीना $500 छ र तपाइँको अग्रिम प्रीमियम कर क्रेडिट वा APTC (संघीय सरकार बाट वित्तीय सहायता) प्रति महिना $200 छ, तपाइँको शुद्ध प्रीमियम हुनेछ $300 प्रति महिना
मैले गत वर्ष अपील गरें र मेरो क्षेत्रको लागि भन्दा अर्को स्वीकृत योजना चयन गर्न अनुमति दिइयो। यदि मैले स्वास्थ्य सेवा लागत सहायता प्राप्त गर्न जारी राख्न चाहान्छु भने मैले के गर्नुपर्छ?
यदि तपाईंले इनरोल गर्नुभएको योजना अझै पछिको पात्रो बर्षको लागि स्वीकृत योजना हो भने, तपाईंको अपीलको निर्णय अझै खडा छ। तपाईंले आफ्नो मेडिकल कभरेज नवीकरण गर्न र हेल्थकेयर लागत सहायता प्राप्त गर्न जारी राख्नका लागि ओपन एनरोलमेन्टको क्रममा उचित कदमहरू उठाउनु भएको निश्चित गर्न यस पृष्ठमा जानकारी समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। तपाईलाई नयाँ योजना सारांश र प्रदायक नेटवर्क समीक्षा गर्न प्रोत्साहित गरियो कि यो विकल्प अझै तपाईका लागि काम गर्दछ।
म लेन काउन्टी वा लिन काउन्टी कैसर सेवा क्षेत्रमा बस्दछु र २०१ 2018 देखि स्वीकृत प्रोविडेंस योजनामा नामांकन गरिएको छ, के मैले योजनाहरू परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ?
होइन, तपाईंले योजनाहरू परिवर्तन गर्नुपर्दैन। तपाईं २०२१ स्वीकृत केपी सिल्वर २00००/40० योजनामा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, वा तपाईं स्वीकृत प्रोविडेंस योजनामा रहन सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाईले स्वीकृत कैसर योजनामा रूपान्तरण गरेपछि, यो तपाईको बाँकी बर्षको लागि स्वीकृत योजना हो र तपाई स्विच पछि प्रोभिडेन्स योजनाको लागि Carewell SEIU 503 सुविधाहरू प्राप्त गर्न तपाईसँग विकल्प छैन।
म लेन काउन्टी वा लिन्न काउन्टी कैसर सेवा क्षेत्रमा बस्दछु र म पहिलो पटक क्यारवेल SEIU 3०3 सुविधाहरूको लागि नामांकन गर्दैछु; के म स्वीकृत प्रोविडेन्स योजनामा भर्ना गर्न सक्छु?
होईन, यदि तपाईं लेन काउन्टी वा लिन्न काउन्टी कैसर सेवा क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ र तपाईं २०२१ को लागि नयाँ नयाँ क्यायरवेल सेईयू 3० benefits सुविधाहरूमा भर्ना हुनुभयो भने, तपाईंको स्वीकृत योजना कैसर केपी सिल्वर २00००/40० योजना हो।
सुविधा सुविधा कार्ड
भुक्तान गर्न म के लाभ सुविधा कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु?
एक स्वीकृत मार्केटप्लेस योजना को लागी तपाइँको शुद्ध मासिक प्रीमियम बिल।
कटौतीयोग्य तपाईंको स्वीकृत बजार योजनामा लागू। एक कटौती योग्य राशि हो कि तपाइँ बीमा योजना भुक्तान गर्नु अघि तपाइँको बीमा योजना कवर सेवाओं को लागी तिर्नै पर्छ।
चिकित्सा सेवाहरू र तपाईंको स्वीकृत बजार योजना द्वारा आधिकारिक नियमहरूको लागि प्रतिलिपिहरू। एक copyayment (वा copyay) एक निश्चित रकम हो जुन तपाईंको बीमा योजनाले तपाईंलाई भुक्तान गर्न आवश्यक हुन सक्छ, र सामान्यतया यो कारणले हुन्छ जब तपाईं सेवा वा प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्नुहुन्छ।
चिकित्सा सेवाहरू र तपाईंको स्वीकृत बजार योजना द्वारा आधिकारिक सल्लाहहरूको लागि सिक्काइन्स। Co Co urance बीमा लागत को एक प्रतिशत हो तपाईंले सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्नु पर्छ तपाईंको बीमा योजना कभर। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंको बीमा योजना को एक "80०/२०" सिक्काइन्स व्यवस्था छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईले कुनै कटौतीयोग्य भुक्तानी गरेपछि तपाईको बीमा कम्पनीले कभर मेडिकल खर्चको 80०१TP१० तिर्नेछ र तपाईले बाँकी २०१TPTP लाई तिर्नु पर्छ।
म कसरी मेरो लाभ सुविधा कार्ड प्रयोग गर्ने?
तपाईंको कार्डले नियमित डेबिट कार्डको रूपमा काम गर्दछ, दुई महत्वपूर्ण भिन्नताहरूको साथ:
१. तपाईको कार्ड प्रयोगमा सीमित छ, यसको मतलब तपाई यसलाई केवल कम्तिमा खर्च गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ "म के भुक्तान गर्न कार्ड प्रयोग गर्न सक्छु?"
२. तपाईले आफ्नो कार्ड एटीएममा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न वा खरिद गर्दा नगद फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
लाभ सुविधा कार्डमा कति पैसा छ?
तपाईको कार्डमा त्यहाँ दुई "खाताहरू" छन्। एक खाता मेडिकल र प्रिस्क्रिप्शन कापीहरू, कटौतीयोग्यहरू र कभर गरिएका सेवाहरू र प्रिस्क्रिप्सनहरूको लागि सिक्युरन्स खर्च भुक्तान गर्न वार्षिक रकमको साथ प्रिलोड गरिएको छ। २०२१ मा, त्यो रकम १TP2T6,500 हो, तर यो वर्ष-बर्ष परिवर्तन हुन सक्छ। अन्य खाता तपाईंको शुद्ध मासिक प्रीमियम भुक्तान गर्न आवश्यक रकमको साथ प्रीलोड गरिएको छ: तपाईंको व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियमको अंश जुन तपाईंको संघीय कर क्रेडिट (एपीटीसी) द्वारा कभर गरिएको छैन।
के मेरो बचेको शेष राशि अर्को वर्ष & #039; को राशिमा रोल हुन्छ?
होइन। तपाईले प्रत्येक क्यालेन्डर वर्षमा हुने कभर खर्चको लागि फिर्ता दिन सकिने अधिकतम रकम त्यो क्यालेन्डर वर्षको लागि निर्धारित रकम हो। कुनै अंश जुन पात्रो वर्षको लागि प्रयोग गरिदैन, भविष्यको क्यालेन्डर वर्षमा व्यय हुने भुक्तानीको लागि रोल अप गर्न सकिदैन।
मेरो कार्डको समयावधि कहिले सकिन्छ?
तपाईंको बेनिफिट सुविधा कार्ड मितिमा समाप्त हुनेछ तपाईं अब सेयरवेल SEIU 3०3 HCA बेनिफिटहरूको लागि योग्य हुनुहुन्न, वा कार्डको अगाडि सूचीबद्ध गरिएको महिना र वर्ष, जुन कुन मिति पहिलो हो। Ameriflex तपाइँको नयाँ कार्ड सुविधा कार्ड तपाइँको वर्तमान कार्ड मा म्याद सकिने मिति भन्दा अघि एक महिना पठाउँनेछ यदि तपाइँ अझै पनि त्यस समयमा HCA सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ। यदि तपाईं सँग यसका बारे प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं Ameriflex पुग्न १-8888-868-3--353939 कल गरेर सक्नुहुन्छ।
मेरो बेनिफिट सुविधा कार्डले मेरो प्रीमियम भुक्तान गर्न कार्य गरिरहेको छैन, मैले के गर्नुपर्छ?
Ameriflex, कार्ड प्रशासकको साथ तपाईंको ब्यालेन्स जाँच गर्नुहोस्, या त तपाईंको MyAmeriflex मोबाइल अनुप्रयोग वा Ameriflex अनलाईन खाता प्रयोग गरेर, वा १-8888-86868--3539 calling कल गरेर। यदि प्रीमियम तिर्न पर्याप्त पैसा छ भने, आफ्नो बीमा वाहकलाई फेरि प्रयास गर्न सोध्नुहोस्। यदि तपाईंसँग तपाईंको कार्डमा पर्याप्त पैसा छैन भने, कृपया १-84444-5077-75554, विकल्प 3, विकल्प २ मा कल गर्नुहोस्।
मेरो बेनिफिट सुविधा कार्डले मेरो जेब खर्चको लागि भुक्तान गर्न काम गरिरहेको छैन, म के गरूँ?
Ameriflex, कार्ड प्रशासक, १-8888-86868--3539 at मा कल गर्नुहोस्। तपाईं आफूलाई होमकेयर कर्मचारीको रूपमा पहिचान गर्न चाहानुहुन्छ र तपाईंको कलको समयमा निम्न उपलब्ध छ: तपाईंको कार्ड, मिति र सेवाको प्रकार जुन तपाईंले भुक्तानी गर्न प्रयास गरिरहनु भएको थियो र तपाईंले अनुभव गर्नुभएको मुद्दाको विवरण।
मसँग गत वर्षबाट मेडिकल बिलहरू छन्। के म तिनीहरूलाई मेरो लाभ सुविधा कार्डमा भुक्तान गर्न सक्छु?
तपाईं एकै बर्षमा प्राप्त कभर्ड सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्न बेनिफिट सुविधा कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं कभर गरिएको सेवामा सम्बन्धित पकेट आउटको जेकेट खर्चको लागि अघिल्लो क्यालेन्डर वर्षबाट दावीहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले प्रतिपूर्ति प्रक्रिया प्रयोग गर्नु आवश्यक छ।
अग्रिम प्रीमियम कर क्रेडिट (APTC)
अग्रिम प्रीमियम कर क्रेडिट (APTC) के हो?
एडभान्स प्रीमियम कर क्रेडिट (एपीटीसी) संघीय सरकार द्वारा जारी गरिएको एक कर क्रेडिट हो जुन तपाईं स्वास्थ्य बीमा बजार मार्फत योजनामा भर्ना गर्नुहुँदा तपाईले आफ्नो मासिक बीमा भुक्तानी (तपाईको "प्रीमियम" भनिन्छ) कम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कर क्रेडिट आय मार्केटप्लेस एप्लिकेसनमा राखिएको आय अनुमान र घर जानकारीमा आधारित छ। यदि तपाईंको अनुमानित आय संघीय गरीबी रेखाको १००१TP१ टी र 1००१TP १ टी बीचमा पर्दछ भने, तपाईं प्रीमियम कर क्रेडिटको लागि योग्य हुनुहुन्छ।
APTC मेरो स्वास्थ्य सेवा लागत सहयोग मा कसरी लागू हुन्छ?
तपाईंको स्वीकृत बजार योजना प्रीमियम र बाहिरको जेब खर्चहरूको भुक्तानीको लागि स्वास्थ्य सेवा लागत सहयोगको लागि योग्य हुन, तपाईंले आफ्नो योजना प्रीमियमहरूको लागि योग्य कुनै पनि एडभान्स प्रीमियम कर क्रेडिट (एपीटीसी) को पूर्ण रकम लागू गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईं आफ्नो वार्षिक पारिवारिक आम्दानीलाई कम महत्त्व दिनुहुन्छ, र तपाईं हुनु पर्छ भन्दा एक उच्च एपीटीसी प्राप्त गर्नुहुन्छ, र नतिजाको रूपमा, तपाईं आफ्नो वार्षिक कर दाखिलामा आईआरएसमा मेलमिलाप शुल्क तिर्नुपर्दछ, तपाईं सुविधाहरूबाट मेलमिलाप शुल्कको प्रतिपूर्ति पाउन योग्य हुन सक्नुहुन्छ। प्रशासनिक कार्यालय।
मेरो एपीटीसी कसरी परिवर्तन हुन्छ?
जब तपाई स्वास्थ्य बीमा बजार मार्फत कभरेजका लागि आवेदन गर्नुहुन्छ, तपाईले आफ्नो आय र परिवारको आकारको लागि अनुमान गरिएको आधारमा एडभान्स प्रीमियम कर क्रेडिटको लागि योग्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईंको आय परिवर्तन भयो, वा यदि तपाईंले तपाईंको परिवारका सदस्यहरू थप्नुभयो वा हराउनुभयो भने, तपाईंको प्रीमियम कर क्रेडिट सायद पनि परिवर्तन हुनेछ। सकेसम्म सकेसम्म बजारमा आय र घरपरिवार परिवर्तन रिपोर्ट गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सहायताको लागि, उपत्यका बीमा पेशेवरहरू १-50-3-3749-84-8471 मा सम्पर्क गर्नुहोस्।
म मेडिकेड (वा अन्य कभरेज) को लागि योग्य छु, के म आफ्नो बजार योजना, एपीटीसी र हेल्थकेयर लागत सहयोग राख्न सक्छु?
अहँ, यदि तपाईं मेडिकेडको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, तपाईं Carewell SEIU 503 HCA सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्न, र तपाईं कुनै पनि अग्रिम प्रीमियम कर क्रेडिट वा बजार मूल्य शेयर कटौतीको लागि पनि योग्य हुनुहुन्न। यदि तपाईं मेडिकेडको लागि योग्य हुनुहुन्छ र हालै बजार योजनामा भर्ना हुनुभएको छ भने, कृपया १-84444-5033-734848 call जतिसक्दो चाँडो कल गर्नुहोस्। Medicaid र बजार योजना बारेमा थप जानकारीको लागि उल्लेख healthcare.gov/medicaid-chip/cancelling-marketplace-plan/ उल्लेख र अन्य कवरेज र बजार योजनामा थप जानकारीको लागि healthcare.gov/have-job-based-coverage/ विकल्प /
मेरो ट्याक्स फाइलिंगको लागि मलाई मेरो एटीटीसी को बारेमा के थाहा छ?
यदि तपाईंको परिवारको कसैको बजार योजना छ भने, तपाईंले फारम १० 95--ए, स्वास्थ्य बीमा बजार विवरण प्राप्त गर्नुपर्नेछ तपाईंको करहरूका लागि। १० 95। Forms फारमहरू जनवरी-फेब्रुअरीमा अघिल्लो वर्षको कभरेजको लागि बाहिर पठाइन्छ। यसले बजार योजनाको जानकारी समावेश गर्दछ जस अन्तर्गत तपाईंको परिवारको कोहीले पनि कभरेज थियो। यो आईआरएस होईन बजारबाट आउँछ। तपाईंले यसलाई मेल वा तपाईंको अनलाईन मार्केटप्लेस खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। तपाइँ वा तपाइँको कर तयारीकर्तालाई आईआरएस फाराम to need 62२ पूरा गर्न १० 95। फाराम आवाश्यक हुन्छ, जुन तपाइँको अग्रिम प्रिमियम कर क्रेडिटसँग मिलाप गर्नको लागि तपाइँको करहरूसँग प्रत्येक वर्ष फाइल गर्न आवश्यक छ। फारम १० 95 about को बारेमा स्वास्थ्यसेवा. gov/tax-for-1095/ मा जान्नुहोस् । यदि तपाईंले १० 95।-ए प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाईं आफ्नो बजार खातामा एक प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेसमा १-8००-१18१-2--25959 मा सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले मेरो आयलाई बढावा दिएँ र धेरै थोरै एपीटीसी पनि पाए, म के गर्ने?
लाभ प्रशासनिक कार्यालय कल गर्नुहोस्। तपाइँले तपाइँको ट्याक्स फारमहरू १०40०, १० 95 A ए र 62 62 62 the62 बेनिफिट प्रशासनिक अफिसमा पठाउन आवश्यक छ, साथै प्रीमियम समायोजन प्रतिपूर्ति फारमको साथ।
मैले मेरो आयलाई कम महत्त्व दिएँ र धेरै APTC प्राप्त गरे, म के गर्ने?
संघीय सरकारको orणीको सम्पूर्ण अंश वा अंशका लागि पुन: भुक्तानी प्राप्त गर्न तपाईंको कर फारामहरू १००40, १० 95 A ए र 62 62 6262 सँग प्रीमियम समायोजन प्रतिपूर्ति फारम लाभ प्रशासनिक कार्यालयमा बुझाउनुहोस्।
के हुन्छ यदि म अबदेखि एटीटीसीको लागि योग्य छैन?
यदि तपाईंले एपीटीसीको लागि योग्यता गुमाउनु भयो किनभने मार्केटप्लेसले तपाईंको घरको आकार निर्धारण गर्दछ र / वा आयले तपाईंलाई कर receivingण लिनबाट अयोग्य ठान्छ, तपाईं अझै पनि केयरवेल SEIU 3०CA HCA सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुनेछ तपाईंको स्वीकृत बजार योजनासँग सम्बन्धित। जहाँसम्म, यदि तपाईंले एपीटीसीको लागि योग्यता हराउनुभयो किनकि तपाईंले जानकारीको लागि अनुरोधलाई प्रतिक्रिया गर्नुभएन, वा अन्यथा त्यस्ता एपीटीसी मर्मत गर्न आवश्यक कार्य गर्न असफल हुनुभयो भने, तपाईं मात्र प्रीमियम सहायता लाभ प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुने थियो तपाइँको एपीटीसी समाप्त भएको छैन। तपाईं प्रीमियम मा फरक को लागी जिम्मेवार हुनेछ।
मैले एपीटीसीको लागि मेरो योग्यता कसरी पुन: प्राप्त गर्न सक्छु यदि मैले यो गुमाएँ किनभने मैले जवाफ दिएन वा मेरो एपीटीसी मर्मत गर्न कार्य गर्न विफल भएँ?
यदि तपाईंले एपीटीसीको लागि योग्यता हराउनुभयो किनकि तपाईंले बजारबाट जानकारीको लागि अनुरोधलाई प्रतिक्रिया गर्नुभएन, वा अन्यथा त्यस्ता एपीटीसी मर्मत गर्नको लागि आवश्यक कारवाही गर्न असफल भएमा, तपाईंले मार्केटप्लेसले अनुरोध गरिरहनु भएको जानकारी पेश गर्नु आवश्यक छ र तपाईंको कर पुनःप्राप्त गर्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ। क्रेडिट वा ट्याक्स क्रेडिटको लागि पुन: निर्धारित हुन। तपाईं प्रीमियममा भिन्नताको लागि जिम्मेवार हुनुहुनेछ जब सम्म मार्केटप्लेसले कुन कुरा पुन: परिभाषित गर्दैन, यदि कुनै छ भने, एपीटीसी तपाईं योग्य हुनुहुन्छ। १- for4444-5044--734848 Call प्रश्नहरू वा भ्याली इन्स्योरेन्स प्रोफेशनल्सलाई १-50०3--974-7171१ at मा तपाईंको एपीटीसी पुन: भण्डार गर्न सहयोगका लागि कल गर्नुहोस्।
मेडिकेयरमा संक्रमणका लागि व्यक्तिहरूका लागि जानकारी
यदि तपाईं हालै बजार योजनामा भर्ना हुनुभएको छ भने, तपाईंले मेडिकेयर योजना सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघि आफ्नो बजार योजना समाप्त गर्न कदमहरू चाल्नुपर्नेछ। उपत्यका बीमा प्रोफेशनल्सका एजेन्टहरूले तपाईंलाई त्यसमा मद्दत गर्न सक्दछन् - सहायताका लागि १-84444-5033-734848 call कल गर्नुहोस्। साथै, यदि तपाईंसँग पहिले नै बेनिफिट सुविधा कार्ड छ भने, कृपया तपाईंको कार्ड समात्नुहोस्। तपाईं यसलाई कभर मेडिकेयर को-भुक्तान, सिक्सेन्सरी, कटौतीयोग्य र नुस्खाहरूको लागि प्रयोग गर्न जारी राख्नुहुनेछ, जबसम्म तपाईं हेल्थकेयर लागत सहयोगको लागि योग्य रहनुहुनेछ। तपाईं आफ्नो मेडिकेयर प्रीमियमको लागि बेनिफिट सुविधा कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
कटौतीयोग्य तपाईंको मेडिकेयर योजनामा लागू। एक कटौती योग्य राशि हो जुन तपाईंले मेडिसकेयरले भुक्तान गर्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले तपाईंको मेडिकेयर योजनाले सेवाहरूको लागि तिर्नु पर्छ।
चिकित्सा सेवाहरूको लागि सह-भुक्तानी र तपाईंको मेडीकेयर योजना द्वारा आवरण दिए। एक सह-भुक्तानी (वा सह-भुक्तानी) एक निश्चित रकम हो जुन तपाईंको मेडिकेयर योजनाले तपाईंलाई भुक्तान गर्न आवश्यक हुन सक्छ, र सामान्यतया यो कारण हो जब तपाईं सेवा वा प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्नुहुन्छ।
चिकित्सा सेवाहरू र तपाईंको मेडिकेयर योजनाले आवरणमा प्रिस्क्रिप्सनको लागि सिक्सेन्स। Co Co urance बीमा लागत का एक प्रतिशत हो तपाईंले सेवाहरूको लागि भुक्तानी गर्नु पर्छ तपाईंको मेडिकेयर योजना कभर। लागत साझेदारी तपाईंको मेडिकेयर योजनामा निर्भर गर्दै, कभर गरिएको सेवाको २०१२०११ देखि 1०१TP१tt सम्म पर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईको मेडिकेयर योजना को "/०/२०" सिक्सुरेन्स व्यवस्था छ, यसको मतलब यो छ कि तपाईले कुनै कटौती योग्य तिर्नु पछाडि तपाईको मेडिकेयर योजनाले कभर गरिएको मेडिकल खर्चको 1०१TP1T तिर्नेछ र तपाईले बाँकी २०१TPTP लाई तिर्नु पर्छ।
मेरो कार्डमा कति पैसा छ?
लाभ सुविधा कार्ड मेडिकल र प्रिस्क्रिप्शन को-भुक्तान गर्न, कटौतीयोग्यहरू र कभर गरिएका सेवाहरू र प्रिस्क्रिप्शनहरूको लागि सिक्युरन्स खर्च भुक्तान गर्न वार्षिक रकमको साथ पूर्व-लोड गरिएको छ। २०२१ मा, त्यो रकम १TP2T6,500 हो, तर यो वर्ष-बर्ष परिवर्तन हुन सक्छ।
तपाईंको बेनिफिट सुविधा कार्ड मितिमा समाप्त हुनेछ तपाईं अब सेयरवेल SEIU 3०3 सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्न, वा कार्डको अगाडि सूचीबद्ध गरिएको महिना र वर्ष, जुन मिति पहिले हो। Ameriflex तपाइँको नयाँ कार्ड सुविधा कार्ड तपाइँको वर्तमान कार्ड मा म्याद सकिने मिति भन्दा अघि एक महिना पठाउँनेछ यदि तपाइँ अझै पनि त्यस समयमा HCA सुविधाहरूको लागि योग्य हुनुहुन्छ। यदि तपाईं सँग यसका बारे प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं Ameriflex पुग्न १-8888-868-3--353939 कल गरेर सक्नुहुन्छ।
मेरो भुक्तानी गरिएको समय बन्द लाभ कसरी गणना गरिन्छ?
तपाइँको भुक्तान समय अफ बेनिफिट्स पहिलो महिनामा कमाईको आधारमा निर्धारण गरिन्छ तपाई पात्र बन्नुभयो। धेरै हेरचाह प्रदायकहरूको लागि यो २०२० जनवरी २०२० देखि १ घण्टा १ਟੀपी २ टी १ is छ।
म कसरी मेरो PTO लाभ शेष पत्ता लगाउन सक्छु?
तपाईको बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेट अफिसबाट प्रत्येक फेब्रुअरी र जुलाईमा तपाईको बेनिफिट रकमको साथ तपाईले चिठी पाउनुहुनेछ यदि तपाईं आफ्नो लाभको एक अंश अनुरोध गर्नुहुन्छ र तपाईंको बाँकी शेष रकम के हो भनेर थाहा छैन भने बेनिफिट प्रशासनिक कार्यालयलाई १-84444-50०7-75554 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, विकल्प,, विकल्प २।
मैले किन लाभार्थी फारमको पदनाम पूरा गर्नुपर्दछ?
लाभार्थी फारामको पदनामले तपाईंलाई कसैलाई छनौट गर्न अनुमति दिन्छ कुनै पनि अर्जित पीटीओ लाभ प्राप्त गर्न तपाईंको मृत्युमा बाँकी रहेको त्यस्तो लाभ प्राप्त गर्नु अघि। यदि कुनै लाभार्थी पदनाम बनाइएको छैन, वा यदि तपाइँको तोकिएको लाभार्थी तपाईं जीवित छैन वा यदि तिनीहरू स्थित हुन सक्दैनन् भने, अर्जित शेष तपाईंको ईस्टेटको कार्यकारीलाई भुक्तानी गरिनेछ।
मैले रद्द गरेको चेकको लागि किन शुल्क तिर्नु पर्छ?
बैंकहरूले चेक जारी गरेपछि शुल्क रद्द गर्दछ। यस कारणले गर्दा, तपाईंलाई नयाँ चेक अनुरोध गर्नु अघि एक चेक जारी भएपछि कम्तिमा दश व्यावसायिक दिनहरूको प्रतिक्षा गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
के म मेरो पीटीओ बेनिफिटहरूसँग सम्बन्धित फारम १० 99?? प्राप्त गर्नेछु?
भुक्तान गरिएको समय कर योग्य आय हो। यदि तपाईले एक बर्षमा $600 वा अधिक भुक्तानी गरिएको समय छुट पाउनु भयो भने तपाईले बेनिफिट प्रशासकीय कार्यालयबाट १० 10 Form फारम प्राप्त गर्नुहुनेछ। यदि तपाईंले फारम १०9999 प्राप्त गर्नुभएन भने पनि फाइदा अझै कर योग्य आय हो।
म मेरो उपभोक्ताको लागि मेरो समय बन्द हुँदा ब्याकअप केयर प्रदायक कसरी फेला पार्न सक्छु?
तपाईंले भुक्तानी बिदा लिने बित्तिकै आफ्नै प्रतिस्थापन खोज्नु तपाईंको जिम्मेवारी होइन। उपभोक्तासँग उनीहरूको प्रदायकहरूको छनौट र काममा लिने प्राथमिक जिम्मेवारी हो। भुक्तानी बिदा उपभोक्ता द्वारा प्राधिकृत हुनुपर्दछ, राहत चाहिएको खण्डमा उपलब्ध हुनुपर्दछ र उपयुक्त एजेन्सीलाई सूचित गर्नुपर्नेछ वैकल्पिक कामदारको घण्टा प्राधिकृत गर्नका लागि। कहिलेकाँही उपभोक्तालाई उपयुक्त प्रतिस्थापन प्रदायक भेट्टाउन केस प्रबन्धक / व्यक्तिगत एजेन्ट / सेवा संयोजकको सहयोग चाहिन्छ।
के मैले कुन दिन वा घण्टा म मेरो उपभोक्ताबाट बेनिफिटहरू प्रशासनिक अफिसमा रिपोर्ट गर्दैछु?
होईन, तपाईले आफ्नो समयलाई बेनिफिट प्रशासनिक कार्यालयमा रिपोर्ट गर्नु आवश्यक पर्दैन।
प्रशिक्षण किन महत्त्वपूर्ण छ?
प्रशिक्षणले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंसँग उपभोक्ताहरूको लागि उच्च स्तरको सुरक्षा र गुणस्तर सेवा प्रदान गर्न उपकरणहरू र विश्वास छन्। तालिमले तपाईंलाई नयाँ सीपहरू सिक्न, तपाईंसँग पहिले नै भएका सीपहरूलाई बलियो बनाउन, र क्यारियर प्रगतिको लागि अवसर प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ।
कसले प्रशिक्षण पूरा गर्न आवश्यक छ?
वर्तमान होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूले मार्च ,१, २०२२ सम्म १२ घण्टा ताजा प्रशिक्षण पूर्ण गर्नु पर्छ।
नयाँ व्यक्तिगत समर्थन र होमकेयर कामदारहरूले उनीहरूले उपभोक्ताको लागि काम गर्न सुरु गर्नु अघि चार घण्टा अभिमुखीकरण र आठ घण्टाको कोर प्रशिक्षणको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्नेछ १२० दिन भित्रमा रोजगारीको थालनी गर्न।
थप रूपमा, सबै हेरचाह प्रदायकहरूले प्रत्येक पुन: प्रमाणिकरण हुनु अघि प्रत्येक दुई बर्षमा १२ घण्टा निरन्तर शिक्षा पूरा गर्नु पर्छ।
मैले कसरी प्रशिक्षण प्राप्त गरें जुन मैले पहिले नै पूरा गरिसकें?
केयरवेल SEIU 503 प्रशिक्षण द्वारा प्रस्ताव गरिएको प्रशिक्षणको लागि, तपाइँ आफ्नो प्रशिक्षण पूरा हुने जानकारी केयरवेल लर्निंग पोर्टल मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं हामीलाई सम्पर्क गरी १-84444-5033-734848 । वा ईमेल द्वारा CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com ईमेल गरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
ओरेगन होम केयर आयोगले प्रस्ताव गरेको प्रशिक्षण र प्रमाणपत्रहरूको लागि, OHCC लाई सम्पर्क गर्नुहोस् (777777) 676767-00००77 वा ईमेल गरेर प्रमाणपत्रहरू। OHCC@ddhaha । state.or.us ।
के म प्रशिक्षण लिन आवश्यक छ यदि म & #039; मा परिवार हेरचाह प्रदाता?
हो सबै होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरू जसलाई मेडिकेड वा ओरेगन परियोजना स्वतन्त्रता मार्फत क्षतिपूर्ति दिइन्छ - परिवारका सदस्यहरूका लागि पूर्ण रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि नयाँ प्रशिक्षण आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ।
के म एक सुविधा, एजेन्सी, वा सिधा उपभोक्ताको लागि काम गर्छु भने के मैले प्रशिक्षण लिन आवश्यक छ?
तपाईंले तालिम लिन आवश्यक छ यदि तपाईं एक होमकेयर वा व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ता हुनुहुन्छ जो एक उपभोक्ताको लागि सीधा काम गर्दछ। तपाईंले पालना गृह, समूह गृह, आवासीय हेरचाह सुविधा, सहयोगी बस्ने सुविधा, वा नर्सि facility सुविधा जस्ता सेटिंग्समा काम गर्नुभयो भने तपाईंले प्रशिक्षण लिन आवश्यक छैन। त्यहाँ फरक आवश्यकताहरू छन् जुन तपाईंले अनुसरण गर्नुपर्छ। यदि तपाईंले इन-होम एजेन्सीहरू वा प्रदायक एजेन्सीहरूसँग काम गर्नुभयो भने तपाईंले पनि प्रशिक्षण लिनुपर्दैन। यदि तपाई स्वतन्त्र विकल्प कार्यक्रम (ICP) को भाग हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रशिक्षण लिन आवश्यक छैन, तर तपाई चाहानुहुन्छ भने तपाईले प्रशिक्षण लिन सक्नुहुन्छ।
आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण को कसले निर्धारण गर्दछ?
SEIU 3०3 र ओरेगन होम केयर कमिशनले केयर प्रदायकहरूका लागि न्यूनतम प्रशिक्षण मापदण्डहरू स्थापना गर्न एक प्रशिक्षण कार्य समूहको विकास गर्‍यो। कार्य समूह सामुदायिक साझेदारहरू, सरोकारवालाहरू, वकिल समूहहरू, युनियन जसले वर्कफोर्स (एसआईआईयू), होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरू, उपभोक्ताहरू, र ओरेगन मानव सेवा विभागका प्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। कार्य समूहले समावेश गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण बिषयहरू पहिचान गरे जसले उपभोक्ताहरू र हेरचाह प्रदायकहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछन्।
यदि मैले प्रशिक्षण आवश्यकताको लागि मिति छुटेमा के हुन्छ?
यदि तपाईं म्यादहरू पूरा गर्नुहुन्न भने, तपाईंले सम्भाव्यताको लागि उपभोक्ताको लागि काम गर्न रोकिनुपर्दछ जबसम्म तपाईंले आवश्यकताहरू पूरा गर्नुहुन्न। यो नियम बनाउने प्रक्रिया मार्फत निर्धारित गरिनेछ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम र पाठ्यक्रम जानकारी अनलाइन उपलब्ध हुनेछ। तपाईं आफ्नो प्रगति निगरानी गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र आगामी म्यादहरूको बारेमा रिमाइन्डरहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ।
प्रशिक्षण कहाँ आयोजित हुनेछ?
हाल Carewell मात्र प्रशिक्षण अनलाइन प्रस्ताव गर्दै छ। जब यो कक्षाकोठामा फर्कने सुरक्षित हुन्छ, तालिम ओरेगोन राज्य वरिपरि आयोजित हुनेछन्। मिति र स्थानहरू केयरवेल लर्निंग पोर्टलमा पोष्ट गरिनेछ।
के तालिम अ than्ग्रेजी बाहेक अरू भाषाहरूमा पनि दिइन्छ?
केयरवेल SEIU 3०3 प्रशिक्षण टोलीले अरबी, स्पेनिश, रूसी, भियतनामी, मन्डारिन (भ्वाइस-ओभर), र सरलीकृत चिनियाँ (लिखित) लगायतका विभिन्न भाषाहरूमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। यदि एक प्रशिक्षण हाल तपाइँको मनपर्ने भाषामा प्रस्तुत गरीएको छैन भने, Carewell SEIU 503 प्रशिक्षण टोली तपाइँ उपस्थित कोर्स (हरू) को लागी दोभाषे तालिका दिन तपाइँसँग काम गर्दछ। दोभाषे अनुरोध गर्न एक ईमेल पठाउनुहोस् carewellseiu503training@risepartnership.com वा कल गर्नुहोस् १-84444-5033-734848।।
मलाई प्राप्त गरेको विगत प्रशिक्षणको लागि मलाई क्रेडिट दिइनेछ?
होईन, यदि तपाईंले ओरेगन होम केयर कमिशनमार्फत प्रमाणीकरण प्राप्त गर्नुभयो र प्रमाणिकरण आवश्यकताहरू पूरा गर्न जारी राख्नुभयो भने, तपाईंले विशिष्ट प्रमाणीकरण कायम गर्न आवश्यक पर्ने बाहेक अतिरिक्त निरन्तर शिक्षा पाठ्यक्रमहरू लिन आवश्यक पर्दैन। क्यारियर विकास र प्रमाणपत्रहरूका बारे थप जानकारी फेला पार्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कसलाई तालिमबाट छुट दिइन्छ?
यदि तपाईंसँग निम्न मध्ये एक प्रमाणपत्र छ भने, तपाईं रिफ्रेस प्रशिक्षण श्रृंखलाबाट छुट पाउनुहुनेछ:
व्यावसायिक विकास प्रमाणन (PDC)
वर्धित होमकेयर वा व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ता
असाधारण व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ता
भेन्टिलेटर आश्रित Quadriplegia (VDQ), जब उपलब्ध छ
परम्परागत स्वास्थ्य कार्यकर्ता
कृपया नोट गर्नुहोस् कि छुट पाउनका लागि, तपाईंले प्रमाणीकरण सक्रिय राख्नु पर्छ। यदि तपाईंसँग यी प्रमाणपत्रहरू मध्ये कुनै सक्रिय छ कि छैन भनेर अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, कृपया reg7777-86767-000077 calling मा कल गरेर वा प्रमाणपत्रहरूमा ईमेल पठाएर ओरेगोन होम केयर कमिशनलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
हाल, केयरवेल केवल अनलाइन प्रशिक्षण प्रदान गर्दैछ। जब यो कक्षाकोठामा फर्कने सुरक्षित हुन्छ, तालिम ओरेगोन राज्य वरिपरि आयोजित हुनेछन्। मिति र स्थानहरू केयरवेल लर्निंग पोर्टलमा पोष्ट गरिनेछ।
म कसरी अनलाइन कक्षामा पहुँच गर्न सक्दछु?
तपाईले केयरवेल लर्नि Port पोर्टलमा दर्ता गरेपछि तपाईले कुनै अनलाइन पाठ्यक्रमहरू चयन गर्न र दर्ता गर्न सक्षम हुनुपर्दछ जुन तपाईलाई उपलब्ध छ। तपाईलाई इन्टरनेट पहुँचको साथ उपकरण चाहिन्छ जस्तै स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, वा कम्प्युटर अनलाईन कक्षामा पहुँच गर्न।
के हुन्छ यदि मलाई इन्टरनेट पहुँच गर्न समस्या भइरहेको छ?
हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न! हामीसँग वैकल्पिक शिक्षा विकल्पहरू छन्। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको लागि राम्रो काम गर्ने एक विकल्प फेला पार्न सक्दछौं। हामीलाई कल गर्नुहोस् 4503-5033-73 or48 । वा ईमेल CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com मा ।
के हुन्छ यदि मसँग कम्प्युटरमा पहुँच छैन?
यदि तपाईंसँग कम्प्युटरमा पहुँच छैन भने, तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटलाई प्रशिक्षण पहुँच गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा पहुँच छैन? हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न! हामीसँग वैकल्पिक शिक्षा विकल्पहरू छन्। कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ताकि हामी तपाईंको लागि राम्रो काम गर्ने एक विकल्प फेला पार्न सक्दछौं। हामीलाई कल गर्नुहोस् 4503-5033-73 or48 । वा ईमेल CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com मा ।
म कसरी मेरो पासवर्ड रिसेट गर्ने?
लगइन गर्न क्यारवेल लर्निंग पोर्टलको माथिल्लो दाहिने कुनामा रहेको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। यो लिंकबाट, यदि तपाईंलाई तपाईंको पासवर्ड थाहा छैन भने, तपाईं “पासवर्ड बिर्सनुभयो” मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई आफ्नो पासवर्ड रिसेट गर्न लिंक ईमेल गर्दछ।
भुक्तानी र उपजीविका
के मैले प्रशिक्षणको लागि पैसा तिर्नु पर्छ?
होइन। प्रशिक्षण सबै होमकेयर र व्यक्तिगत समर्थन कामदारहरूको लागि निःशुल्क हो।
के म लिने प्रशिक्षणको लागि मलाई एक वजीद प्रदान गरिनेछ?
एक homecare वा व्यक्तिगत समर्थन कामदार applyin G भएकाहरूलाई हुन सफलतापूर्वक पूरा अनलाइन कोर र कोर कार्यशाला उपस्थित लागि $65 stipend लागि $65 stipend दिइनेछ। अभिविन्यासमा भाग लिनको लागि कुनै वजीवान छैन।
वर्तमान हेरचाह प्रदायकहरू आवश्यक ताजा ताजा सत्रहरूमा भाग लिने समयको लागि एक वजीद प्रदान गरिनेछ। अनलाइन रिफ्रेसर पूरा गर्नका लागि $135 वजीवान र रिफ्रेसर वर्कशप पूरा गर्नका लागि $65 वजीवान छ।
मैले कसरी वजीद प्राप्त गर्ने?
जब तपाइँ सफलतापूर्वक तपाइँको पहिलो वजीवान योग्य कोर्स पूरा गर्नुभयो, तपाइँलाई स्टाइपेन्ड कसरी प्राप्त गर्ने छनौट गर्न विकल्प दिइनेछ। तपाईं यसलाई मेल द्वारा भौतिक भिसा कार्ड वा ईमेल मार्फत डिजिटल कार्डको रूपमा प्राप्त गर्न रोज्न सक्नुहुन्छ। समयमै वैदेशिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि कृपया तपाईंको मेलि address ठेगाना र ईमेल ठेगाना तपाईंको Carewell लर्निंग पोर्टल प्रोफाइलमा अप-टु-डेट छन् भनेर पुष्टि गर्नुहोस्। स्टाइप्यान्डहरू प्रत्येक महिनामा दुई पटक पठाइन्छ, त्यसैले तपाईंलाई वजीवान लिनको लागि केहि हप्ता लाग्न सक्छ। अधिक जानकारी को लागी कृपया स्टिपेन्ड नीति हेर्नुहोस्।
म कसरी होमकेयर वा व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ताको रूपमा गर्ने कामको लागि भुक्तानी गर्ने बारेमा थप जानकारी कहाँ पाउन सक्छु?
यदि तपाईं गृहपृष्ठ सेवाकर्मी हुनुहुन्छ भने, कसरी भाउचरहरू भर्ने र बुझाउने बारेमा थप जानकारीको लागि, कृपया ओएचसीसी होमकेयर श्रमिक संसाधन पृष्ठको ट्यूटोरियल सेक्सन भ्रमण गर्नुहोस् ।
तपाइँ यहाँ भिडियो लाई सन्दर्भ गर्न सक्नुहुन्छ ।
यदि तपाईं एक व्यक्तिगत समर्थन कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने, EXPRS कसरी प्रयोग गर्ने बारेमा अधिक जानकारीको लागि कृपया ODDS वेबसाइटमा व्यक्तिगत समर्थन श्रमिक संसाधन पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस् ।
अब कभर गर्नुहोस्: स्वास्थ्य बीमा मार्केटप्लेस नामांकनको लागि फेरि खुला छ!
थप जान्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।